SEO Aina - Semalt Anokuudza Zvinhu Zvose Zvaunofanira Kuziva
Imwe yenzira dzakanyanyisa uye dzakanakisisa dzekuwana zvikamu zvakanaka mumatsva ekutsvakurudza ndeyekutsvaga injini yekutsvaga kana SEO. Zvose zvinotsvaga injini dzakadai saKongen, Bing, neGoogle dzinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti uenzanise webhusaiti yako. Chisikopo chako chicharatidzwa peji rekutanga kana waita SEO zvakanaka uye wakachengetedza zvose zvinodiwa. Nik Chaykovskiy, the Semalt expert, anotsanangura kuti mutsauko chete pakati pe mutsvuku weSeO uye chichena chitsvuku SEO ndiwo mararamiro avo emhando. Tsvaga injini dzinofadza mawebhusayithi akamboita tsvina yekutsvaga injini nekugadzirisa mitemo yavo.
Hasha yehwanda SEO inorudzi rwekutsvaga injini yekutsvaga inogona kushandisa zvisina kusimba mukutsvakurudza injini yekutsvaga kwekukwidziridza nzvimbo yepamusoro mukati memazuva mashoma. Kwete, iyo nzira yakanaka uye inobatsira yekuwana zvibereko zvakanaka. Kana iwe waita chikwata chetsvuku SEO, unogona kuwana nzvimbo yakanaka yewebsite yako mukati memazuva, asi haisi kuzogara kwenguva refu.
Munyika yekutsvaga injini, kune mamwe mitemo nemirairo yekutarisira..Aya mawebsite anopa ruzivo rwevashandi-zvinofadza kuvashanyi avo uye anotarisira mazwi eGoogle anogona kuwana mhinduro yakanaka. Chikara chetsva SEO chinouya nenzira yekubhadhara mazano, spam comments, fake blog posts, zvinyorwa zvinyorwa, kushandiswa kwezviri mukati, nezvimwe zvinhu zvakafanana. Iwe unogona kupedza mari shoma pamaitiro akadaro, asi iwe haungambofi wakawana zvaunoda zvehupenyu hwose. Izvozvo ndezvokuti injini yekutsvaga haina kupa nzvimbo dzakanaka kune mawebsite ane black hat SEO. Vanogona kudana kuti nzvimbo yako ive spam uye inogona kukudzivirira kuti urege kuunza hupenyu hwemashoko pamapeji ako ewebhu.
Chikwata chitsvuku SEO inzira iri nyore uye inoshamisa zvikuru yekuwana zvakanaka injini yekutsvaga. Inoumbwa nehuwandu hwemagadzirirwo nemaitiro aungashandisa kutarisa vateereri vakarurama uye kuwana zviitiko zvinonakidza zvebhizimisi rako. Nzira dzemuchena mutsva SEO inotora nguva yakawanda sezvo kutsvaga injini hakuzorevi nzvimbo yako nyore nyore, asi ndiregei pano ndikuudze kuti migumisiro yayo yekupedzisira inoshamisa. Iwe unofanirwa kushandisa zvinyorwa zvemashoko makuru, fambisa mazwi makuru, tsvaga tsvakurudzo, tora backlinks yepamusoro, nyora meta tags, tsanangudzo yemeta meta uye kuisa pfungwa pahuwandu hwehuwandu hwekunyora. Pakupedzisira asi kwete zvishoma, iwe unofanirwa kuteerera digital marketing kana huwandu hwemagariro evanhu. Kana iwe ukanyanya kukurudzira mararamiro ako mumagariro evanhu, iyo yakakwirira ichava mikana yako yekuwana migumisiro yakanaka.
Kana iwe uchida kuwana zviitiko zveupenyu uye nzira yakanakisisa, ndinokurudzira kuti unyore zvinyorwa zvakanakisisa sezvavanenge vachiita basa rinokosha munjini yekutsvaga. Kunyora basa rakasiyana-siyana uye ruremekedzo-basa risina basa rinokosha zvikuru. Kana zvisina kudaro, iwe haugoni kuvimbiswa nehutano uye nemigumisiro yenguva refu. Chokutanga pane zvose, iwe unofanira kufungisisa mamwe mazwi ewebsite yako uye uisewo mazwi ezvinyorwa muhutano. Iva nechokwadi chekuti unosanganisira magwaro anchore uye nyora zvinhu zvepamusoro kune vaenzi vako. Ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa dzekuwana vanhu chaivo vashanyi, uye muridzi webhusaiti anogona kuwana zvakawanda kubva kumuchena mutsvuku SEO.